करोडौंकि धनी , यि सुन्दर युवती सङ्ग बिहे गर्ने पुरुषलाई २ करोड इनाम दिइने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् – Life Nepali
करोडौंकि धनी , यि सुन्दर युवती सङ्ग बिहे गर्ने पुरुषलाई २ करोड इनाम दिइने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्
कुनै पनि बुबा आमा आफ्नो सन्तानको बिवाह भन्ने बित्तिकै उत्साहित नहुने त कुरै भएन् । बुवा आमाको सपना नै हुन्छ । आफ्नो छोरीहरुलाई राम्रो लाएकको केटा संग बिवाह गरिदिने । अनि उनिहरुको विवाहमा आफ्नो गक्षले दा’ईजो दिने । यस्तैमा आज हामी तपाईहरुलाई यस्तै बिवाहको अनि दाईजोको बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । जुन अलि अनौठो रहेको छ । *** पुरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले छोरीको बिहे गराउनका लागि अनौठो घोषणा गरेका छन् । अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी कुमारी छोरी कार्न्सिता सँग बिहे गर्नेलाई इनाम स्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड ‘झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ’ दिने घोषणा गरेका हुन् । तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त ‘केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने’ ।
दोस्रो केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । २६ बर्षीय कर्निताले स्नातक तहसम्म पढेकी छिन् । उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको बुबाको दावी छ । ति ब्यक्ति एक कृषि फार्मको मालिक रहेको बताईएको छ ।सम्पर्क को लागी तल यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Previous ससुरा बुहारीको अ’वैध स’म्बन्ध जब श्रीमानले थाहापाएर गरे कसैले वि’श्वास नगर्ने काम !
Next कतारबाट बाहिरियो नेपाली यु’वतिको अ’श्लिल भिडियो !
शारीरिक स ,म्पर्कको यो शैली जुन महिलालाई निकै मन पर्छ’
26 mins ago Life Nepali
37 mins ago Life Nepali